साहित्य - News site from Nepal
पर्वत – पर्वत जिल्लाकै अग्रणी साहित्यिक संस्था पर्वत साहित्य संगमले आफू अन्तरगत रहेका विभिन्न विधाका ७ वटा पुरस्कार स्रष्टाहरुलाई समर्पण गरेको छ। शनिवार कुश्मामा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी धौलागिरी क्षेत्रभित्र जन्मेर नेपाली भाषा, साहित्य, कला,...
किशोर सापकोटा कुरा २०५० सालतिरको हो, म कक्षा सातमा पढ्थे, बुवाले बाबु तेरो ब्रतबन्ध गर्नुपर्ने भयो, गरौंला, गरौंला भन्दा भन्दै निकै ढिला भइसक्यो भन्दै गर्दा मलाई भने एउटा कुराको ठूलो पीर थियो– ब्रतबन्ध पछि गरिने...
किशोर सापकोटा बिहान उठेकै थिइन, मोबाइलमा एक तमासले घण्टी बज्यो र उठ्न बाध्य बनायो । यसो हेरें चितपरिचित साथीको रहेछ, हेलो के छ तिम्रो खबर ? मात्र के भन्न पाएको थिएँ । शुरु भयो उसको...
पर्वत – प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर कुश्मामा दुईवटा साहित्यिक कृति विमोचन भएका छन् । पर्वत साहित्य सङ्गमको आयोजनामा कुश्मास्थित पर्वत जेसीजको सभाहलमा आयोजित एक समारोहमा सह–प्राध्यापक डा. षडानन्द पौड्यालको अनुसन्धानमूलक कृति ‘धवलागिरिको नेपाली साहित्य’ र...
म नेता हो
अर्जुन निर्जन पौडेल जसरी खिइएको हुन्छ नदिको ढुङ्गा जसरी गुल्टिएको पहाड कण कण बन्छ बेसि पुगुन्जेल जसरी आकाश को माथी पुग्न हिडेको झोक्का बादल झर्छ असिना र पानी बनेर ठिक त्यस्तै छन मेरा केही थान रहरहरु बजाउछन बाजा र बन्द गरेर पनि...
पर्वत साहित्य संगमद्वारा विद्यार्थीका लागि स्थलगत कविता लेखन प्रतियोगिता
पर्वत- पर्वत साहित्य संगमको आयोजना र कुश्मा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा विद्यालय स्तरीय कविता लेखन प्रतियोगिता आज कुश्मामा सम्पन्न भएको छ । कविता लेखन प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै कुश्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछाने यस्ता कार्यक्रमले...
काठमाण्डौ – राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे एक सय एक वर्ष लाग्नुभएको छ । घिमिरे विसं १९७६ असोज ७ गते लमजुङको साबिक बाहुनडाँडा गाविसको भीरपुस्तुन भन्ने ठाउँमा जन्मनुभएको हो । उहाँले कवितासँगै साहित्यका अन्य विधामा पनि कलम...
पर्वत– प्रगतिशिल लेखक संघको ६८ औं स्थापना दिवसका अवसरमा पर्वतमा राष्ट्र निर्माणमा श्रष्टाको भुमिका विषयक बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले राज्यलाई सहि मार्गमा डो¥याउनका लागि स्रष्टाहरुकामे भूमिका महत्वपुर्ण हुने बताएका छन्...
काठमाडौं : वरिष्ठ साहित्‍यकार मदनमणि दीक्षितको निधन भएको छ। पत्रकार कनकमणि दीक्षितले बिहीबार बिहान दीक्षितको निधन भएको ट्‍विटरमा लेखेका छन्। उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि कालिकास्थानस्थित घरमा राखिने उनले लेखेका छन्। उनी ९७ वर्षका थिए। दीक्षितले ‘माधवी’ उपन्यासका...
कतै सडक अनि कतै पेटीले सिकाएका छ्न । कति कुरा खेतबारीका खेतीले सिकाएका छ्न ।महिना नसकिँदै, महिना मर्यो भन्दै आउँछन, पैसा कमाउन पर्छ भन्ने घरबेटीले सिकाएका छ्न ।अरुको रमिता देख्दा देख्दै, म एक्लो हुनुमै खुसी छु, बिबाह...